Waxaan la yaabay baan arkee, Yaasiinka Yaasiinka!! (QORMO) | Qaranimo Online
Waxaan la yaabay baan arkee, Yaasiinka Yaasiinka!! (QORMO)
January 8, 2013 | Filed under: Faalooyinka,Warka Maanta | Posted by: QOL Admin Mohamed Abdullahi Dhaaley
W/Q: Mohamed Abdullahi Dhaaley | Aduunyadu waa meel lagu kulmiyay waxyaabo kala duwan oo hadba waqtiga is bedbedelayaa la socda. Qofkuna Yaab, Farax, Murug, Dhib, Dheef iyo in kaloo badanba waa uu la kulmaa inta uu noolyahay!!
Aniga, waxaan abidkeyba ku dadaali jiray inaan ku ad-adkaado Dhaqanka iyo Hidaha Soomaalida. Waxaana iigu wacan Dalka ayaan ku dhashay, ku barbaaray, walina ku noolahay.
Ma arag dhaqan ka badalan midka Diinta ku salaysan ee ay Soomaalidu heysato.
Inkasta oo aan Dalal kale waqti kusoo qaatay, hadana Maankeyga marnaba kama guurin jeceylka iyo ku dhaganaanta Dhaqankeyga.
Taasi waxay i gaarsiisay inaan fajac iyo amakaag la kulmo waqtiyo badan oo aan arkay, la kulmay, ama maqlay Qof Soomaali ah oo wax Dhaqankii wanaagsanaa ka duwan samayay ama samaynaya!!
Wax badan baan Sheeko ku maqlayay inay jiraan Gabdho Soomaaliyeed oo Rag Shisheeye ah waliba aan Muslim ahayn u dhaxaya oo Guur la wadaagay! Wiilal qudhoodana waan maqlay oo Soomaaliyeed, kuwaas oo Gabdho Shisheeye ah guursaday.
Arrimahaas runtii si uu Ilahay ogyahay bay saamayn iigu reebeen! Waxaan moodi jiray inay ka dhigantahay Aduunyadii oo baaba’day ama Cirkii oo soo dumay marka aan maqlo dhacdooyinkaas iyo kuwo la mid ah.
Wiilal aan Saaxibbo nahay baan Berri hore ku wada nooleyn Aqal Qura, mar aan meel Qurbe ah ku sugnaa. Waxaan xilliyada qaar wadaagi jirnay Sheekooyin aan waqtiga isku dhaafinayno amaba kusoo xusuusanayno dalkii iyo arrimihiisa maadaama aan ka maqnayn.
Sheekooyinka na dhex mari jiray oo aan isku aragtida ka ahayn waxaa ku jiray arrimaha aan iminka kor kusoo xusay ee ku saabsan Guurka Soomaalida iyo Shisheeyaha waliba kuwa aan Muslimka ahayn dhex maraya.
Runtii waxaan oran jirnay: Sidee bay ku ahaan kartaa arrinta ceynkaas ah!!
Tii oo jirta ayaa Aduunyadu waa is rog-rogtaaye, waxaan maanta Qalinka u qaatay inaan qoro FAALLADAN. Waxaana igu dhaliyay arrimaha soo galootiga iyo dhalan-rogga ku ah Dhaqankeena sharafta leh oo soo kordhaya.
Maalmahanba waxaan Barta xiriirka Bulshada loo sameeyay ee FACEBOOK oo Internetka laga helo ku arkayay Sawirro aad loola yaabo oo Gabdho Soomaaliyeed ay leeyihiin.
Gabdhuhu iyaga hasoo bandhigaan Sawiradan ama dad kale ha keenaane waxay yihiin kuwo aan asturnaantii Diinteenu qabtay heysan. Waana ay qaawanyihiin!!
Waxaa kasii daran, Sawirada qaar ee Gabdhahani waxay soo galeen iyagoo Qaad cunaya (Qayilaya). Waxaana ka muuqda Wajigooda inay ku qanacsanyihiin falalkaas ay samaynayaan, kana war hayaan Sawirada laga qaadayo, hadiiba aanay iyagu iska qaadeyn Sawirka.
Waan ka yaabay xaqiiqdii arrimahan!! Waa soo galooti!! Mana aha wax salka ku haya Dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaalida!!
Sawiradaanu aad bay waqtigan ugusii kordhayaan halkaas loo yaqaan FACEBOOK ee ay dadku ku wada xiriiraan.
Waxay ila noqotay DHAQAN-DOORSOOM xoog badan oo isasoo taraya. Waxaanaba qiyaastay in dad badan oo ay arrintan ceeb la tahay iminka ay ku saamoobi doonaan oo maalinba maalinta ku xigta la arki doono kuwo hor leh oo Sawiradoodoo ceynkaas ah soo bandhiga.
Waxaase niyadeydu ay qabowday markii aan ka arkay dadka FAALLOOYINKA kasoo bixinaya Sawiradan ama sida FACEBOOK-ga gudihiisa looga yaqaan (COMMENTS) soo saaraya. Kuwaas oo intooda badani Waano,Tallo iyo Wacdi siinaya Gabdhahaas Sawirada qalafsan soo bandhiga.
Hadii UMMAD dhexdeeda laga waayo qof Ilahay ka baqa oo Xumaha ka diga, Samahana dadka fara, waxay taas noqonaysaa Halaag iyo burbur Ummadaas soo food saara.
Marka inaga wali waa ay wanaagsantahay arrinteenu oo dad badan baa ka damqanaya Xumaha. Waxaase halis loogu jiraa inay wax kastaba is daba gadiyaan oo dhaqankuna halaabo.
Marka aan FACEBOOK iyo waxa aan ku arkay kasoo tago, Maalmo dhawayd Waxaa kusoo badanayay XAMAR iyo qaybo kale oo dalka ah, lagana yaabo inay Caalamka kalena u gudbeen, Sawirro lagasoo qaaday Gabdho Soomaaliyeed oo dhamaantood wada Qaawan, wax Dhar ahna aan wadan.
Gabdhahaas Sawiradooda TELFOONADA gacanta ayeey badanaa ku jiraan oo dad badan aan ku arkay. Waxaa kale oo jira GABDHO iyo WIILAL Soomaaliyeed oo iyaguna Muuqaalo xun xun (GALMOOD Sharci daro ah) lagasoo duubay, si la mid ah sida Dadka aan Muslimiinta ahayn ay u sameeyaan FILIMADA loo yaqaan (SEX-ga). SUBXAANALLAAH!!
Mid ka mida MUUQAALADAN oo Magaalada Muqdisho aad ugu baahsan xilligan ayuu Wiil Dhalinyaro ah iiga sheekeeyay in lagasoo Duubay Hal Gabadh iyo ku dhawaad 3 Wiil oo halka ay daganyihiin iyo Reerahooda si wayn loo garanayo.
Gabadha ayaa waxay ahayd mid aad u Dhalinyar, waxaana la sheekeystay oo Aqal aanay cidi joogin ku balamiyay Wiilal Dhalinyaro ah, kuwaas oo markaa ka dibna ka Duubay MUUQAALO aad u fool xun!!
Muuqaalada Gabadha laga duubay ayaa si aad ah waqti kooban gudaheed ugu faafay Xamar iyo meelo kaleba. Waxayna iyagoo socda gaareen Gabadha Aabaheed iyo Walaalaheedba.
ALLA UUR XUMO BADANAA!!. Toloow siduu noqonayaa Qofka dhalay Gabadhaas iyo kuwa la dhashayba marka ay Muuqaalada xun xun ee Inantooda lagasoo duubay arkaan?
Sida aan rumeysanahay, Cid kasta oo ILLAHAY taqaana ayaa ka caroonaysa kana naxaysa Falalkan soconaya. Si la mida sidaas ayeeyna arrimahani iigu dhaliyeen inaan Maalmo badan ka fikiro oo aan kaligey isla hadlo.
Maadaama aanan lahayn Awood ka badan inaan dhowr Erey ku xuso Dareenkeyga arrimahan ku wajahan, ayaan go’aansaday inaan QORMADAN Xariiqo si ay dad badani iila wadaagaan ka war qabka iyo la socoshada isbedelka xumaanta ah ee Dhaqanka Soomaaliyeed Weerarka ku haya.
Waa laga yaabaa inay dad badan oo ama Waayo hore noolaa ama Sheekooyinkii hore maqlay ay yiraahdaan: “Horayba waa loo arki jiray loona maqli jiray Gabdho samaynaya wax Dhaqanka Soomaaliga ah ka baxsan”.
Laakin Saaxibada sidaas ku fakaraya waxaan kula doodayaa inaanay horay u jirin Qof Soomaaliyeed oo Gabadh ama Wiil ah oo inta Falal xun xun sameeyo hadana soo Sawiraya si Xumaantiisii ay dadkoo dhami uga marqaati kacaan!!
Gaba-gabadii qoraalkeyga, waxaan Ilahayga awoodda badan ka tuugayaa inuu na wanaajiyo, Dhaqankeena Sharaftiisana ilaaliyo, inta xumaatay ama Wadadii ka weecatayna dib usoo celiyo, Qaarkeena wanaagga ku dhaganna kusii saacido inay sidaas usii wanaagsanaadaan Illaa Geeridu kaga timaado. AAAMIIN AAMIIN AAMIIN
FG: Waan jeclaay inaan idiinsoo bandhigo Sawirada igu dhaliyay inaan Qormadan diyaariyo. Hase yeeshee anigoo ka hadlaya Dhaqan xumo, iima haboona inaan Sawirro xun xun soo bandhigo, taas oo ka dhigmeysa Xumaantii oo aan sii faafinayo.
Mohamed Abdullahi Dhaaley
Other Interesting posts:Qaadka Waxaa Lagu duraa Daroogo Layiraa BCB oo ah ...Ciyaar Boroordiiq ah oo lagu Xusayey Halyaayadii I...Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta booqday Od...Xaflad si heersare loo agaasimay oo kadhacday Toro...Isku aadka ciyaaraha Soomaalida ee HIRDAWasiirada Jaamacada Carabta oo Taageeray Soomaaliy...In Minn., new tactics to help immigrant studentsJaaliyada Beesha Karanle oo tacsi u direyso nabado...Sawiro soodhaweyntii iyo mudaaharaadkii Minnisota Somali MP wants Canadian parents to keep close eye...Facing death row in SomaliaMacalin Khaliif oo kawarbixiyay dhawicii kasoo gaa...Socialize	Posted by QOL Admin on January 8, 2013. Filed under Faalooyinka, Warka Maanta.